पुरानो रूसी मजा - यो खरायो शिकार। सबै समय मा यो विशेष गरी भने, पुरुष को मनपर्ने अवकाश गतिविधिहरु को एक थियो यो शिकार छ शिकारी संग। जंगल को किनारा मा, खेतमा, जंगल - यो खरायो शिकारी मा Prusak गर्न जंगल मा जानुहोस्। शिकार कुकुर को यो फारममा निर्णायक भूमिका खेल्छन्। भौंक देखि शिकारी hares पछि लागोस्।
एक खरायो मा शिकारी संग शिकार केही नियमहरू र नैतिकता, ध्यान दिएर पुस्ता देखि पुस्ता गर्न शिकारी द्वारा हस्तान्तरण जुन अनुपालनको आवश्यक छ। शिकार जा जहाँ क्षेत्र, ध्यान स्थानबाट टाढा ungulates मा जहाँ छापे चयन गरियो।
शरद ऋतु मा रोचक शिकार खरायो। जब ड्रप छैन एक लामो समय को लागि बरफ, र खरायो जाडो "uzerku मा", रोमाञ्चक शिकार लागि आफ्नो कोट परिवर्तन भएको छ। दुई वा तीन मानिसहरूले एकताबद्ध शिकारी, ती स्थानहरू सामान्य खरायो, र ध्यानपूर्वक नजिकका सबै सेतो स्थलहरू जाँच्नै जहाँ मा, जंगल छन्। यो समयमा धेरै नजिकबाट जमीन मा पशु झूट। यो कठिन आफ्नो परिपक्वता आउन छ।
बरफ पतन गर्दा, निशान मा hares र hares ट्रयाक को सुरु गर्नुहोस्। उत्सुक मा, अनुभव शिकारी को खरायो, शिकार चरम चिसो र गहिरो हिउँ शिकारी को प्रयोग अनुमति जब सुरु भयो।
यो कुकुर पाउन धेरै सजिलो छ जब यो प्रारम्भिक बिहान छोड्न उचित छ ताजा, अझै पनि न्यानो खरायो निशान। को कुकुर, मान्छे जहाँ खरायो को परिपक्वता मा अवस्थित छ एक क्षेत्र मार्फत सार्दा श्रृंखला दिँदै। को lowlands मा - अनुभवी शिकारी वर्षाको, भिजेको वर्ष मा, खरायो पहाडलाई मा ड्राई ठाउँमा खोज्नुपर्छ भन्ने राम्ररी थाह, र ड्राई छन्। खरायो को शरद ऋतु मा सामान्यतया खुला क्षेत्र आयोजना गरिन्छ। यस वन तिनीहरूले घटेको चिन्तित छन्। snowfall संग खरायो जंगल मा गहिरो rushes र खरायो निकटतम गाउँमा जाडो को जहाँ रुचाउने नजिक नजिकिंदै।
ती ठाउँहरू जहाँ शिकार मैदान सानो गाउँमा वा सहर हो मा, खरायो, बाटोमा जान गाउँमा पार र सतावट कुकुर को हटाउनु खोज्ने उठायो। अक्सर, स्थानीय शिकारी जस्तै "रणनीति" हरे सजग छन् र लगातार निकटतम गाउँ को Crossroads मा स्थिति ले। तसर्थ, खरायो को शिकार facilitated छ। खरायो त्यहाँ एक लीक छ मा, तर मुख्यतः कुकुर देखि, को भू-भाग मा निर्भर गर्दछ आकार जो एउटा सर्कल, बनाउँछ।
यदि एक खरायो पीछा कुकुर छिटो, यसलाई शान्त, "पैदल यात्रा" कुकुर को पछि लाग्नुलाई भन्दा एक धेरै ठूलो सर्कल बनाउँछ। ट्याक्सी संग पश्चिमी युरोप मा कि शिकार खरायो आधारमा। जनावरको परिपक्वता संग लिँदै, को शिकारी शुल्क झोला बाहिर खींचती र यो एडी मा राख्छ। ड्याक्शन्ड यसको ढिलो तर eared noticing, वोट डाली, सरलीकृत hares को यस प्रकार शिकार pursues।
जनावरको लागि प्रतीक्षा गर्दा, तपाईं क्षेत्र राम्रो परिपक्वता पशु वा ती उहाँले अघिल्लो राउन्ड थियो जसमा पदहरू देख्यो जो देखि स्थान रोज्नुपर्छ। को लीक नजिकिंदै गर्दा शिकारी अझै पनि खडा गर्न, तर आगो गर्न तत्परता मा हुन छ। तपाईं ठाँउ ठाँउ बाट सार्न सक्नुहुन्न: को खरायो आफ्नो Habitable क्षेत्र फेंक गर्न सक्छन् कुकुर नेतृत्व र शिकार बिगार्छ थियो।
कुकुर चोट लाग्नु गर्न छैन शूटिंग सावधानीहरु पालन। तपाईं यसलाई स्पष्ट, गोली नम्बर2वा नम्बर3को खरायो हत्या गरिएको छ जब, शिकारी आवाज शिकार बाँकी कुकुर पंजे पंजे प्रोत्साहन जानकारी र शिकार जारी हेर्न जब खरायो मात्र हुन सक्छ गोली।
विक्टर Ahn किन राष्ट्रियता परिवर्तन? विकल्प को एक कुरा
Biathlete मैक्सिम Tsvetkov: संक्षिप्त जीवनी तथ्य
दिन को कुन समयमा चलाउन राम्रो छ? शुरुआती खेलाडीहरूलाई लागि सुझाव र चाल
Nadezhda Scardino: जीवनी, रोचक तथ्य
एयर राइफल शूटिंग। हतियार, आफ्नो विशेषताहरु
Agranov याकूबले Saulovich (वास्तविक नाम - Yankel Shmayevich Sorenson)
"आर्थर र Minimoys" - अभिनेता र सुविधाहरू
पहेंलो बोक्रा - यो के हो? प्रक्रिया बारे beauticians र ग्राहकहरु समीक्षा
आह, त्यसैले यो बाख्रा गरेको दूध छ। लाभ र बाख्रा दूध हानि
कसरी "क्रोम" मा भण्डारण पासवर्ड सुरक्षित गर्न विवरणहरू
छविको कट्टरपंथी परिवर्तन: कहाँ सुरु गर्ने?
जीवन एउटा नयाँ दृष्टिकोण: लेजर blepharoplasty
पूर्व-चिकित्सा र पल्मोनरी edema मा चिकित्सा आपतकालीन हेरविचार